भु इँ-चालोमा २२ घन्टा पु’ रिएका सोनिस, भग्नावशेषमा पुरिँदा उनी जम्मा ४ म’ हिनाका थिए. अहिले भेट्दा.. – Ap Nepal
भु इँ-चालोमा २२ घन्टा पु’ रिएका सोनिस, भग्नावशेषमा पुरिँदा उनी जम्मा ४ म’ हिनाका थिए. अहिले भेट्दा..
April 26, 2022 109
निलो टिसर्ट र हाफ पाइन्ट लगा`एका फुच्चे केटो दुगुर्दै कोठा-भित्र पसे। उनको हातमा स्कुलको रि-जल्ट थियो। पछि-पछि उनकी आमा रश्मिला अवाल थिइन्।-खोइ, खोइ! रि-जल्ट हेरौं त,’ हाम्रो आवा-ज सुनेर उनी एक-छिन अल-मलमा परे।ढोकामै अडिएर आमाको अनु-हारतिर हेरे।
यसरी कोठामा नयाँमान्छे आउनु उनको निम्ति सामान्य थियो सायद। उनी अप्ठ्यारो नमा-निकनै हामी-नजिक आए। रिजल्ट देखा-उँदै प्रत्येक विषयको ‘ग्रेड’ ठूलो स्वरमा सुना-उन थाले, ‘ए-प्लस, बी-प्लस, डी-प्लस, सी-प्लस, बी-प्लस…।’
एसकेजी’ मा पढिर-हेका सोनिस अवाल-लाई हामीले सोध्यौं, ‘म्याथमा त डी-प्लसमात्र आएछ नि है? राम्रो हो त्यो?’उनले एक अ-क्षरमा जवाफ फर्काए, ‘नो।’सोनिस धेरै प्रश्न-को जवाफ ‘यस’ र ‘नो’ मा फर्का-उँछन्।’झ्याउ लाग्छ हो म्याथ?”म्याथ होइन सबै-मा झ्याउ लाग्छ,’ त्यसो भन्दै उनले आफ्नो रिजल्ट दिदी सोनियाको हात-मा थमाए अनि टेब-लमा चार्ज भइ-रहेको मो-बाइल थुतेर त्यसैमा झुम्मिन थाले।
त्यो मार्क-सिट सोनिसको आफ्नो होइन रहेछ, दिदीको रहेछ। दिदीको मार्कसिट लिन उनी आमासँग साथी मात्र गएका रहे-छन्। आमा-छोरा स्कुल गएका बेला हामी सोनिया-सँग घरमै कुरेर बसेका थियौं।स्कु-लको परीक्षा आफ्नो ठा-उँमा छँदैछ, जिन्दगी-को परीक्षा भने यी दिदी-भाइले भुइँचालोमै ‘पास’ गरेकी हुन्।
त्यो दिन आमा पसल हिँडे-पछि सोनिया टिभी हेरि-रहेकी थिइन्। छेउमा चार महिनाको भाइ सोनिस मस्त निदाइरहेका थिए। ठूलो-बाका छोरीहरू रुबी र लक्ष्मी पनि आफ्नै धुनमा थिए। एक्कासि हेरिर-हेको टिभी झल्याक-झुलुक हुँदै झिर-झिर गर्न थाल्यो। एकछिनमा फ्याट्टै निभ्यो।
त्यति बेला-सम्म धर्ती हल्लिन थालि-सकेको थियो। उनी बस्ने माटोको घर किरकिर गर्दै थर्थ-राइरहेको थियो। तर, न सो-नियाले चाल पाइन् न त रुबी र लक्ष्मीले। न सोनि-सकै निद्रा टुट्यो।बाहिर हो-हल्ला हुन थालि-सकेको थियो। सबै ‘भुइँ-चालो आयो’ भन्दै भागा-भाग गरि-रहेका थिए। सोनिया-लाई आफ्नै पैतला-मुनिको भुइँ सरक-सरक सरि-रहेजस्तो लाग्न थाल्यो। भित्ताहरू चरक-चरक फाटिन थाले। त्यहाँ-बाट फुस-फुस धूलो झरि-रहेको थियो।
काठका साँघुरा भर्‍याङ-बाट गुर्रर झर्न मात्र आँटेकी थिइन्, उन-लाई ‘प्यारो’ भाइ सोनिस-को ख्याल आयो। पसल जानु-अघि आमाले भनेकी थिइन, ‘टिभीमा मात्र भुल्ने होइन नि, भाइको पनि ध्यान राख्नू।”हुन्छ ममी,’ उनले आ-श्वस्त पारेकी थिइन्।
त्यसै कारण भर्‍याङ-को पहिलो खुट्कि-लोमा पुगि-सकेका उनका पाइला फरक्क पछाडि फर्के। मस्त निद्रामा सुति-रहेको भाइ सोनिस-लाई च्यापेर उनी बाहिर निस्कन खोजिन्। तर मात लागे-जसरी हल्लि-रहेको दराज सोझैं उनमा खप्टिन पुग्यो। त्यही तोडमा भाइ पनि हात-बाट फुत्कियो।
५६ सेकेन्डको ताण्डव-पछि भुइँ-चालो केही बेर शान्त भयो। पसल गएकी आमा रश्मिला छोरा-छोरीको चिन्ताले हाँप-दाँप गर्दै फर्किन्। तर घर पूरै माटो भइ-सकेको थियो। उनी मौन। निःशब्द।
उद्धार-कर्ताले दुई घन्टाको अथक प्रयास-पछि टाउको मुनि खुट्टा माथि भएर पुरिए-की सोनिया फेला पारे। उनी होस-हवासमै थिइन्। हात-गोडामा सामान्य चोट मात्र लागेको थियो।
उद्धार-कर्ताले रुबी र लक्ष्मी-लाई पनि फेला पारे। उनी-हरूको सास भने थामि-सकेको थियो। सोनिस भने कतै फेला परेनन्।सबैले माया मारे-र रश्मिला-लाई सान्त्वना दिन थाले। छोरी सकु-शल फेला पर्नु नै ठूलो कुरा हो भन्दै सम्झाए। तर, रश्मिला मौन थिइन्।
राति ९ बजे भुइँ-चालोले ल्याएको भया-नक शून्य चिर्दै मन्द आवा-जमा बालक रोएको सुनियो। सबैका कान ठाडा भए। रो-एको आवाज त्यही भग्नाव-शेषबाटै आइर-हेको थियो। रश्मिलाले तत्काल चिनि-हालिन्, यो आवाज सोनि-सकै हो।
राति ११ बजे-सम्म प्रयास गर्दा पनि उद्धार टोली सोनिस अ-ड्किएको ठाउँ-सम्म पुग्न सकेन। उनी-हरूले भोलि-पल्ट बिहान ६ बजे-देखि फेरि खोज्न थाले।अर्को दिन बिहान १० बजेतिर भुइँ-चालो गएको २२ घन्टा-पछि सोनिस सकुशल फेला परे।
घर माटोमा मिले पनि त्यस दिन रश्मिला र उनका पति कान्छा अवालको संसार उजाडिनबाट जोगियो। उनीहरूले भग्ना-वशेषमा आफ्नो छोरा-छोरी गुमाउनु परेन।अहिले भक्त-पुर, महाकाली मन्दिर-भन्दा केही तल भाडाको एउटा कोठामा जिन्दगी बिताइ-रहेका उनीहरू-लाई छ वर्षअघि ढलेको घर बनाउन नसक्दा-को दिक्दारी सधैं हुन्छ।
उनी-हरूको एककोठे डेरामा मुश्कि-लले दुइटा खाट अडिएको छ। दराज र केही सामान एकठाउँ थुपारिएका छन्। कोठा-बाहिर बरन्डामा चुह्लो छ।छ वर्षमा हल्का मोटाए-की छन् रश्मिला। आँखा-मा पावर चस्मा चढेको छ। उनी भुँइमा थुचुक्क बसिन्, ऊन र कुरुस समात्दै बोल्न थालिन्, ‘भूकम्प-पीडित भएर बाँ-चेको छ वर्ष भइसक्यो। केही गर्न स-केको छैन। ज्याला मजदुरी गरे-बापत आएको पैसा-ले खानै पुग्दैन रहेछ।’
उनी सिलाइ-बुनाइका काम गर्छिन्। उनको श्रीमान अर्डर-अनुसार इँटा-बालुवा गाडीमा पुर्‍याइ-दिन्छन्। त्यसबाट आएको पैसाले कोठाभाडा तिर्न मुश्किल हुन थाले-पछि यो वर्ष जसो-तसो टहरा बनाउने उनीहरूको सोच छ। त्यसका लागि केही महिनाअघि घरको भग्नाव-शेष पन्छाए। माटो फाले-पछि अहिले जमिन सम्म छ।
‘दुई-तीन महिनामै बनाउने सोचेका छौं। पैसा त जुटि-रहेको छैन तर हेर्दै जाऊँ,’ उनले भनिन्, ‘ऋण गरेर हुन्छ कि जे गरेर भए नि अब त टहरा भए नि बनाउने।’
आफ्नो घर भए जे गर्दा पनि हुन्छ। नाचे पनि ठीक, उफ्रे पनि। हल्ला गरे पनि ठीक, रोए पनि। अरूले त्यस्तो मन पराउँ-दैनन्। झन् साना केटा-केटीलाई त जति सम्हाल्न खोज्दा पनि हो-हल्ला गरि-हाल्छन्। त्यसैले रश्मिला भन्छिन्, ‘अरूको भनेको अरूकै हुन्छ। आफ्नो-मा त छ खाउँला, नत्र चुप लागेर बसौंला। डरै-डर र किच-किच सुनेर त बस्नुपर्दैन।’
भक्तपुर, मूल-ढोकाको त्यो घर रश्मि-लाको एक्लौ-टी होइन, चार दाजु-भाइको अंशभाग हो। जम्मा तीन पैसामा ठ-डिएको घर चार तलाको थियो। प्रत्येक तलामा एउटा कोठा। चार-मध्ये दुई दाजु-भाइ छुट्टै कोठा लिएर बस्न थाले;पछि दुई परिवार मात्र त्यहाँ बसेका थिए।
रश्मिला-लाई टहरा बनाउने आँट त्यसै आ-एको होइन। चार दाजु-भाइले सहमति गरेर जग्गा उन-लाई चलाउन दिने भएका छन्। त्यस-बापतको पैसा उनीहरूले तीन दाजुभाइलाई दिनुपर्नेछ।
सरकारले भुइँचालो पीडितहरू-लाई राहत बाँडेको थियो। घर-धनीपुर्जा नै नभएपछि रश्मिलाको परिवार सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो। पुर्जा नभए पनि उनीहरू बाजे-बराजुदेखि नै यो ठाउँमा बस्दै आएका हुन्। नापी आउँदा घरमा कोही नभएर नाम लेखाउन छुटेको बताउँदै रश्मिला भन्छिन्, ‘सरकारले जब स्ववा-सी भनेर दर्ता खोल्छ, त्यही बेला जग्गा पनि दर्ता गराउँछौं।’
यो जग्गामा घर बनाउन सजिलो चाहिँ छैन। तीन पैसाको जग्गा-मा घर बन्ने भनेको एकतले, एककोठे नै हो। त्यसमाथि तीन आनाभन्दा कममा घर बनाउन नपाइने मापदण्ड छँदैछ।
बाटोछे-उको जग्गा भएकाले अलिकति छाड्नैपर्छ। त्यसो हुँदा जम्मा-जम्मी डेढ पैसा जग्गा बच्छ।
‘नियमले त के भन्छ के? हामी नग-रपालिकासँग सल्लाह लिन्छौं, तर मिल्दैन भने पनि बनाउने हो,’ रश्मिलाले भनिन्, ‘हाम्रो त तीन पैसा भए पनि छ, कि त हामी-लाई अन्त ठाउँ दिनुपर्‍यो, नभए यहीँ टहरा बना-उन दिनुपर्‍यो।’
भुइँचालो गएपछि सोनिस-को पढाइका लागि भने उनीहरूले उति सोच्नुपरेन। सेनाले नै पढा-उने निर्णय गरेको थियो। जसअ-नुसार वार्षिक ५० हजार दिने र पछि सैनिक स्कुलमै पढाउने भनिएको छ। हाल उनी एभरेष्ट स्कुलमा पढि-रहेका छन्। सोनिया पनि हिमा-लयन स्कुलमा छात्र-वृत्तिमा पढिरहेकी छन्।
लकडाउनको समय यी दुवैले अनलाइन कक्षा पढ्नुपर्‍यो। आफ्नो एउटा मात्र मोबाइल हुँदा सुरू-सुरूमा त रश्मिला अलमलिइन्, मोबाइल भाइलाई दिउँ कि दिदीलाई? केही समय श्रीमा-नको पनि चलाउन दिइन्। तर उनी यताउता हिँडिरह-नुपर्ने भएकाले साध्य भएन। फेरि आफ्नो-मा पनि फोन आउँदा उस्तै समस्या।
बल्ल-तल्ल अर्को सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल किनिन्।कोरो-नाको डर भएकाले त्यो समय काम पनि भएन, धेरै महिना फाल्तु बस्नुपर्‍यो। दैनिक मजदुरी गर्नेलाई समस्या-माथि समस्या!
यिनै समस्याले रश्मिला-लाई बढी चिन्तित बनाउँछ। बजारमा सबथोक किन यति महंगो भनेर बेलाबेला मुर्मुरिन्छिन्। अस्ति भर्खर दुई बोरा चामल किन्दा उनलाई त्यस्तै भएछ, ‘पाँच हजार तीन सय रुपैयाँ गयो। मेरो त यति धेरै चित्त दुख्यो नि, भन्नै लाज हुन्छ। साँच्चै रास-नहरू किन यति महंगो भएका होलान्? खानै लोभ लाग्ने भयो। जति मिहिनेत गरेको छ, खानै ठीक्क।’
उमेर र ऊर्जा हुँदा रश्मिला;लाई लाग्थ्यो रे– आफूले जे पनि गर्न सकिन्छ। त्यो बेला उनले ज्यामी कामदेखि खेतीपातीसम्मका काम गरिन्। अहिले ४२ वर्षकी उनी निराश हुन थालिसकिन्, ‘ह्या! यस्तो नि के जिन्दगी? जति गरे पनि दिन फेरिन्न।”यिनीहरूको बुवा पनि गर्दागर्दै थाकिसक्नुभयो,’ उनले अगाडि भनिन्, ‘सोच्दा सोच्दा दिमाग ह्यांग हुन्छ कहिले त। यति टेन्सन… यति टेन्सन। हत्तेरी!’
बुनि-रहेको पन्जा बुन्न छाडेर उनी एकछिन मौन भइन्। फेरि आफैंलाई सान्त्वना दिँदै भनिन्, ‘हुन त हाम्रो-भन्दा धेरै दुःख भएको मान्छे नि हुन्छन् नि है?’भुइँचालोमा सरकारबाट सहयोग नपाउँदा उनी त्यसरी नै आफूलाई सान्त्वना दिन्छिन्, ‘हाम्रोभ-न्दा धेरै दुःख भएको मान्छे नि हुन्छन् नि है।’
त्यसो त उनलाई भेट्न भनेर पुनर्निर्माण कार्यालयबाट दुईपटक मान्छे आएका रहेछन्। उनी-हरूले आशा त देखाइरहे, तर अहिलेसम्म केही गरेका छैनन्।’कति-पटक त आफैंले फोन गरि-सकेँ। म त माग्नेजस्तै भइसकेँ भन्या। बेकार फोन गरेर पैसा मात्र सकिने,’ उनले फेरि दोहोर्‍याइन्, ‘हुन त हामीजस्तो पीडित अरू पनि होलान् नि।’
घर बनाउन नपाउँ-दाको मान-सिक असर रश्मिलाको दिमा-गमा मात्र होइन, परि-वारमै फैलिएको छ। सोनिसले पनि बेला-बेला भनि-रहन्छन् रे, ‘ममी यहाँ नबस्ने, हामी आफ्नो घर कहिले बनाउने?’हामीले उनलाई सोध्यौं, ‘यहाँ बस्न किन मन लाग्दैन?’चुलबुले पारामा सोनि-सले जवाफ फर्काए, ‘अरूको घर हो नि त।’ – सविना श्रेष्ठले तयार पार्नु भएको यो सामग्री सेतोपाटी डट-कम बाट साभार गरेका हौं
Prevटाउकोमा न’ क्कली कपाल टाँसेर तालुमा भित्र सुन लुकाएर ल्याउने व्यक्ति विमानस्थलबाट प’ क्राऊ, उस्को तरिका देखेर प्रहरी नै चकित.. (हेर्नुस् भिडि यो सहित )
Nextजथाभावी लेखेको भन्दै दुबईको जेलमा परेका नेपाली पत्रकार पाण्डेलाई युएईका राजकुमारले दिए आम माफी …
NIFRA ले गर्यो लाभांश घोषणा सुचना सहित